အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီ | Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ AAAA အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (https://immi.company) နှင့်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများသည်သင်၏လျှို့ဝှက်အချက်အလက်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
AAAA အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများကိုကူညီရန်သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်သင်၏အချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒေတာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးဥပဒေများနှင့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ၏လိုက်နာမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အားလုံးကိုမြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နောက်မှအသုံးမပြုလိုပါက info@vnz.bz သို့ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်းလှမ်းချက်များသို့မဟုတ်အခြားအသိပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ငါတို့ကုမ္ပဏီကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အားလုံး AAAA အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် စုဆောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင့်ထံမှတိုက်ရိုက်လာသည်။ သင်၏ဒေတာများအားလုံးကိုတတိယပါတီများကသူတို့အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပဲယုံကြည်စိတ်ချစွာကာကွယ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စီမံခြင်းပြုလုပ်ရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအချိန်ကိုသိမ်းဆည်းပါမည်။
တယ်လီဖုန်း၊ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ရင်းမြစ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်သောအခါအထက်ဖော်ပြပါဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အမှာစာများပြုလုပ်သောဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြောင်းအချက်အလက်များကိုကောက်ယူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များတွင်ကြော်ငြာများနှင့်ဆက်သွယ်မှု၊ ကွန်ယက်များအကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှပေးပို့သောသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည့်စာများလက်ခံရရှိသူများနှင့်လက်ခံသူများ၏သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များသို့ ၀ င်ရောက်မည့်အချိန်နှင့်နေရာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်များ၏ကြာချိန်၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အခြား system data များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ visitors ည့်သည်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစုဆောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များနှင့်မိုဘိုင်းဒေတာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးစင်တာနှင့် ဆက်သွယ်၍ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ထံဖုန်းဖြင့်စုဆောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစုဆောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်အရင်းအမြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံလုပ်ငန်းများကိုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဤပို့ဆောင်ခြင်းအာမခံမှအပသင်၏အချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသို့လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုပါ။ ဤကိစ္စတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်၏လိပ်စာနှင့်အာမခံသို့ကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်မည့်ကုမ္ပဏီသို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည် ကုမ္ပဏီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရန်အမှာစာပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်၏လိပ်စာနှင့်၎င်း၏အာမခံသို့ပေးပို့ခြင်းကိုစီစဉ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်သဘောတူသည်။
သင်၏အမှာစာနှင့်လိုအပ်ချက်များအပြင်အခြားမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမှကျွန်ုပ်တို့ထံမှမရယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လိပ်စာ: info@vnz.bz တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နိုင်သည်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်သူအခြေစိုက်စခန်းတွင်သိမ်းဆည်းသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးသင့်တော်သောအချိန်ကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အချက်အလက်သိုလှောင်မှုဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်ဖြေရှင်းရန်ဤအချက်အလက်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးမပြုတော့သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းပြီးစီးပြီးနောက်ဤအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကကျွန်ုပ်တို့အားထိုအရာကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်ပါကသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်တော်သောအချိန်အတွက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတတိယပါတီသို့ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်။ သင်၏ထပ်မံခွင့်ပြုချက်မရပဲကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအာမခံကုမ္ပဏီများသို့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤအမိန့်ကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သောသင်၏အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုသင်၏လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဒေတာကာကွယ်ရေးနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်သာပေးသည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အရသင်၏အချက်အလက်များကိုမည်သူနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရနိုင်သည်။
ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များ၏တောင်းဆိုချက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏စာရင်းအားတတိယပါတီများသို့လွှဲပြောင်းမည်မဟုတ်ပါ။
7. အီးမေးလ်သတိပေးချက်များ, စာပေးစာယူ, သတင်းနှင့်ပရိုမိုးရှင်း
သင့်ကိုအကြောင်းကြားစာများပေးပို့ရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်၊ ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာယူမှုပြုပါကဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဖြစ်စေသင့်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ရှိသည်။ အဆက်အသွယ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့မှပေးသောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ အထူးလျှော့စျေးများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုခဲနည်းပါးစွာပေးပို့ခွင့်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ် info@vnz.bz တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးခြင်းဖြင့်ဤအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများထံသို့ပေးပို့သောမည်သည့်စာကိုမဆိုဖတ်ခွင့်ရှိသည်။ မည်သည့်စာတစ်စောင်သို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့သောပူးတွဲစာပါအကြောင်းအရာမလုံခြုံပါက၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site သည်သင်၏သေးငယ်သောအပိုင်းအစငယ်များဖြစ်သည့်ကွတ်ကီးများနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသောဖိုင်များဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုစုဆောင်းသောအခါ၊ မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်၊ သိုလှောင်သည့်အခါမည်သည့်အချက်အလက်ကိုဖော်ပြသည်။
သင့်အနေဖြင့် cookies များကို download လုပ်ရန်ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ။
ဝီကီပီးဒီးယားရှိ cookies အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ.
သင်ကသင်လိုအပ်သည်၊ မလိုအပ်သည်ကိုမသေချာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သင်ကသင်လိုအပ်ကြောင်းသေချာလျှင် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်။ သင်အသုံးပြုလိုသောဝန်ဆောင်မှုကိုကွတ်ကီးအားလုံးအသုံးပြုသည်ကိုသင်နားလည်ရမည်။
သင်သည်သင်၏ browser ကို cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ သင်၏ browser သည် cookies ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်ဤ function ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်ကြည့်ရှုသောသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်ရည်ရွယ်သောဆိုဒ်အားလုံး၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသင်နားလည်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် cookies များကို disable လုပ်ခြင်းသည် site ၏အချို့သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းရည်များကို disable လုပ်သောကြောင့် cookies များကိုသင် disable မလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးပါကအသုံးပြုသူများကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောသို့မဟုတ်စာရင်းမသွင်းသောအသုံးပြုသူများအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအသိပေးချက်များကိုပြသနိုင်သည်။ ကျနော်တို့သတင်းလွှာကြေးပေးသွင်းန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်မှတ်မိသော cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ဆက်စပ် cookie အမိန့်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏အမှာစာကို cookie များ၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်သင်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုထပ်မံအသုံးပြုသည့်အခါသင့်အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်သင်မှတ်မိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပါတီများမှပေးသောကွတ်ကီးများကိုသုံးနိုင်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်ကြုံတွေ့ရမည့်မည်သည့်တတိယပါတီ cookies များကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics ကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သုံးစွဲရသောအချိန်၊ သင်ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သို့သင်ကြည့်ရှုသည့်အချိန်တို့ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ် Analytics ကွတ်ကီးအချက်အလက်အကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည် ဒီမှာ.
10 ။ လုံခွုံရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုအလွန်အလေးအနက်ထားသိုလှောင်ရန်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုယူပြီးသူတို့၏လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ဒေတာပေါ် မူတည်၍ သင်၏အချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုမှကာကွယ်ရန်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကာကွယ်ခြင်း၊ စာဝှက်ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊
သတိပြုရန် - သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်နှင့်ဒက်ဘစ်ကတ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိမ်းဆည်းပါ။ သင်ငွေပေးချေခဲ့သည့်ကဒ်၏ဒေတာကိုအမြဲစာဝှက်ပြီးသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ၊ ဒေတာကာကွယ်မှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကဤအချက်အလက်အတွက် info@vnz.bz ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။